« Tsiahy an’i Romule » : « Vonona izahay… 50 mahery ny hira hokaloina », hoy i Ndrema | NewsMada
« Tsiahy an’i Romule » : « Vonona izahay… 50 mahery ny hira hokaloina », hoy i Ndrema
Rabarivola Romule, andrarezin’ny zavakanto sy kolontsaina malagasy. Iray amin’ireo nandrafitra ny tarika Kintana Telo. Hotontosaina ao amin’ny CCEsca Antanimena ny tolakandron’ny 10 septambra izao, ny « Tsiahy an’i Romule », seho an-tsehatra hampiainana indray ireo hira nokaloiny sy ireo sanganasany. Ny tarika Diarin’ny Kintana no hanatontosana izany. Ho vahinin’izy ireo i Salomon sy i Ndrema ary i Mbola (izy mirahalahy zanak’i Romule).
« Efa vonona izahay hizara ireo hira mamy hatrizay », hoy i Ndrema. Nambarany fa vonona tahaka izany, koa ny tarika Diarin’ny Kintana ahitana an’i Soanaivo, i Fidy, i Simon, i Frank miampy an’i Lily, i Nounou, i Tantely ary i Lolona. Mahatratra 50 mahery ireo hira hokaloin’izy ireo mandritra ity fampisehoana ity.
Hanakoako eny an-toerana indray ny hira « Inay aho » izay tsy heno tany amin’ny Radio fa nohirain’i Romule teny an-tsehatra. Ao koa ny « Hamerina ny anaranao », « Fandaharana », « Hiran-drazako », sns, izay handrenesana ny feon’i Ndrema sy i Salomon ary i Mbola.
Ankoatra ireo hira noforonin’i Romule, nihira ny sanganasan’i Rolland Raelison sy ny an’ny mpamorona hafa ihany koa izy.